UAlbert Hofmann kunye noNgeniso lwe-LSD
I-LSD yaqala ukuhlanganiswa ngoNovemba 16, 1938 nguAlbert Hofmann
I-LSD yaqala ukuhlanganiswa ngoNovemba 16, 1938, nguSwitzerland u-Albert Hofmann kwiSandoz Laboratories eBasle, eSwitzerland. Nangona kunjalo, kwakuyiminyaka embalwa ngaphambi kokuba uAlbert Hofmann aqaphele oko wayiqalile. I-LSD eyaziwa ngokuthi i-LSD-25 okanye i-Lysergic Acid Diethylamide iyisicirinogenic i-psychoactive.
I-LSD-25 yayingummiselo wamashumi mabini anesihlanu ophuhliswe ngexesha lokufunda kukaAlbert Hofmann nge- amides ye-Lysergic acid, ngoko ke igama.
I-LSD ithathwa njengesicatshulwa se-semi-synthetic, inxalenye yendalo ye-LSD-25 i-lysergic acid, uhlobo lwe-alkaloid e-ergot eyenziwe ngokwemvelo ngumfutho we-ergot, inkqubo yokwenziwa komsebenzi iyimfuneko ukudala iziyobisi.
I-LSD yaphuhliswa yi-Sandoz Laboratories njengento ejikelezayo yokujikeleza nokuphefumula. Amanye ama-alkaloid ergot aye afundiswa ngenjongo yokwelapha, umzekelo, enye i-ergot isetyenzisiwe ukukhuthaza ukubeletha.
LSD - Ukufumanisa njengeHallucinogen
Kwaye kwafika ngo-1943 uAlbert Hofmann wafumanisa iimpawu ze-hallucinogenic zeLSD. I-LSD inesakhiwo seekhemikhali esifana ne-neurotransmitter ebizwa ngokuthi i-serotonin. Nangona kunjalo, akukacaci oko kuvelisa yonke imiphumo ye-LSD.
Ngokutsho kombhali we-Road Junky, "uAlbert Hoffman wayezibophe ngamabomu [emva kwesazi esiphuthumayo] nge-25 mg, imali engacingi ukuba yayiza kuvelisa." UHoffman wahamba ebhayisekile waza waya ekhaya [ukusuka kwiLebhu] kwaye wafika kwindawo yokwesaba.
Wayevakalelwa kukuba wayephelelwa yintlungu kwaye wayenokucinga nje ukuba acele ubisi oluvela kubamelwane ukuze alwe nobutyhefu. "
Uhambo luka-Albert Hoffman
U-Albert Hoffman wabhala oku malunga namava akhe e-LSD,
"Yonke into egumbini ijikeleze, kwaye izinto eziqhelekileyo kunye neefenitshala zithathwa njengeziqhwaba, zifake iifom. umlingo onobuncwane kunye nomaski ombala. "
I-Sandoz Laboratories, yodwa inkampani yokwenza nokuthengisa i-LSD, kuqala ithengisa le mveliso ngo-1947 phantsi kwegama loshishino.
LSD - Isimo sezomthetho
Kusemthethweni ukuthenga i-Lysergic acid e-US Nangona kunjalo, akukho mthethweni ukucwangcisa i-Lysergic acid kwi-lysergic acid diethylamide.
Imbali yeKraft Foods
UThomas W. Stewart, uMngenisi we-Wringing Mop
Imihlambi ekhulayo: Ibali leMandla okuLawula kokuQala
Imbali yeThuluzi lweMathuluzi
Imbali ye-Cheesecake neCream Cheese
Ngubani owasungula iNsimbi?
Indlela yokwazisa i-Archangel Selaphiel
Isiko lendawo yokuvakasha eHouston
I-10 ye-Donna Summer Songs
Ubukhosi obuphezulu beenkampani zeBallet
Iifowuni - Inkcazo kunye nokuqwalasela
I-Hole Out (i-Out-Out): Yithini iXesha eliqhelekileyo, Iimpawu eziDumileyo
Ukulungiswa kweKholeji kwiSikolo esiphakathi
UMarcel Breuer, uBauhaus Architect kunye noMyili
Indlela Yokubhala Ingxelo Enkulu Yencwadi
Ubuninzi bezinto eziseMhlabeni
Iprofayili ye Sayyid Qutb kunye ne-Biography
Uhlalutyo lweSifundo soPhando - Ukuhlalutya iSifundo seNkundla
Ukuqonda iZisongelo kwizilwanyana nakwizilwanyana zasendle
Ndiyijonga njani imeko yimeko yam?
11 Iingoma ezikhunjulwayo malunga noxolo
Ukusebenzisa i-ArrayList kwiJava
Ukufunda iiChords ezivulekileyo kunye nokubetha kweGititar